1. Isku soo wada duuboo hadiyadaha qaabdhismeedka ahi waa naqshad kale oo qabow oo ficil ahaan u noqon karta ciidaha ama maalmaha gaarka ah, maxaa yeelay runtii noocyo badan oo baakado ah ayaa loogu talagalay qaab qaabeed ah sida sanduuqyada cookie, sanduuqyada shukulaatada, iwm. Dad badan ayaa laga yaabaa inay u maleeyaan in habka duubista hadiyadda silsiladda ay adag tahay, laakiin dhab ahaan maahan wax dhan.
2. Sahayda si loo diyaariyo - Warqad ku duudduuban Hadiyad - Maqasyo - Cajalad qarsoon oo wejiga lagu duubo
3. Kala bixi warqadda duubista oo dhig hadiyadda dhululubo. Isbarbar dhig dusha sare ee warqadda si aad ugu haboonaato sanduuqa gudihiisa.
4. Jar jar xajmiga santuuqa aad asal ahaan dhigatay. Adoo gooya geesaha dhererka warqadda
5. Markaad haysatid duudduub hadiyadeed oo afar-geesle ah oo dheer, dhig sanduuqa hadiyad goobeedka si toosan bartamaha warqadda duubista. Hal dhinac oo ka soo horjeedda cidhifka warqadda si loo diyaariyo duubka duub.
6. Ku billow inaad ku duubto cajalad hufan inta u dhexeysa warqadda iyo sanduuqa hadiyadda.
7. Ka dib ku duub dhinaca kale ee warqadda ah si aad si toos ah ugu xirto sanduuqa hadiyadda. Ku adkeey cajaladda si uusan u soo bixin.
8. Hoos ugu laab warqadda hoose si aad si qurux badan ugu qabsatid dusha sare ee sanduuqa. Kaas oo aan dhib badneyn in lagu shukaansado
9. Qabo geeska warqadda isku dhinac isku dhacaysa, hoos ugu laabo dusha sare ee sanduuqa oo ku dheji cajalad hufan.
10. Ku billow qabashada geesaha adoo ku riixaya warqadda duuduub isku jiho ah isla markaana riixaya illaa inta kalaabku isku le'eg yahay. Markii aad isku laabto ilaa 3-4 jeer, isticmaal cajalad adag oo dhejis ah si aad uga ilaaliso inaad dabciso. Sii wad tan tan ilaa sanduuqa oo dhan.
11. Markaad ku dhameysato dusha sare, rog sanduuqa si aad u sameyso isla salka hoose. Si qurux badan isugu laab laablaabka.
12. Iska yaree dhowr sintimitir oo ah koolo laba dhinac leh iyadoo ku xiran cabirka xargaha. Ku lifaaqan dhabarka Bo Kadib soo qaado Bo oo dhig dusha sare ee sanduuqa dhexda ama qayb kastoo aad jeceshahay. Taasi waa taas.
13. Sida loo duubo hadiyad dhululubo ma dhib badna. Xitaa u dhow xilligii ciidaha, haddii aad rabto inaad hadiyad siiso jacayl Daryeelka kuwa hareerahaaga ah Markaa waa inaad hadiyad sidan ah u duubtaa Kadib isku day inaad si wada jir ah u adeegsato